Myanmar agrees to the appointment of H.E. Mr. Peter Lysholt Hansen as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Denmark to the Republic of the Union of Myanmar – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Myanmar agrees to the appointment of H.E. Mr. Peter Lysholt Hansen as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Denmark to the Republic of the Union of Myanmar
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the appointment of H.E. Mr. Peter Lysholt Hansen as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Denmark to the Republic of the Union of Myanmar with residence in Yangon.
Mr. Peter Lysholt Hansen was born in 1951. After he graduated from University of Copenhagen with the Master of Arts in Economics in 1978, he served as the Secretary at the Ministry of Foreign Affairs. He became the Head of Section in 1980 and served as First Secretary at the Permanent Mission of Denmark to UN from 1983 to 1987. Then he served at the Embassies of Denmark in New Delhi, Pretoria and Dar es Salaam in various capacities from 1989 to 1998. In 2001, he became the Under-Secretary of Bilateral Affairs in the Ministry of Foreign Affairs, Copenhagen. He was appointed as Ambassador of the Kingdom of Denmark to the Socialist Republic of Vietnam in 2004. Since 2010 to date he has been serving as the Ambassador of the Kingdom of Denmark to the Republic of Korea and the Democratic People’s Republic of Korea with residence in Seoul.
Dated: 22 July 2014.
မစ္စတာ ပီတာ လီရှော့တ် ဟန်ဆန် အား ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက် ြပည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ရန် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရက သဘောတူညီပြီး ြဖစ်ပါသည်။
မစ္စတာ ပီတာ လီရှော့တ် ဟန်ဆန် ကို ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် ကိုပင်ဟေဂင်တက္ကသိုလ်မှ စီးပွားရေးဘာသာရပ်ဖြင့် မဟာဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီးနောက် ယင်းနှစ်မှာ ပင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ အတွင်းဝန်ရာထူးဖြင့် အလုပ်စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်မှစတင်၍ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ ဌာနခွဲအကြီးအကဲအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး၊ ၁၉၈၃ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၇ ခုနှစ်ထိ နယူးယောက်မြို့ရှိ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ ဒိန်းမတ်အမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံး၌ ပထမအတွင်းဝန်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၈ ခုနှစ်အထိ နယူးဒေလီ၊ ပရီတိုးရီးယားနှင့် ဒါရစ်ဆလမ် မြို့များရှိ ဒိန်းမတ်သံရုံးများ၌ ရာထူးအဆင့်ဆင့်ဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် ကိုပင်ေဟဂင်မြို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ဟနွိုင်းမြို့အခြေစိုက် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ဒိန်းမတ် နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှစ၍ ယနေ့အထိ တောင်ကိုရီးယားနှင့် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်